Sideen u Tirtiraa ama u Joojiyaa Koontadayda Gaarka ah? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 627
Dadka badankood waxay mari karaan nidaam ay ku doonayaan inay ku tirtiraan koontada Pinterest ama xitaa barkinta si ay u helaan natiijooyin wanaagsan marka ay timaado helitaanka natiijooyin wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in dad badani is weydiiyaan sababta ay fikrad fiican u noqon lahayd kor u qaadida joojinta koontada.
Awood u lahaanshaha in aad tirtirto ama aad dhaqaajiso koonto waa suurtagal aad u fiican oo dadka siinaysa neefta shabakadaha bulshada ama la waayo cillad darrada. Shaki la'aan tani waa fikrad dhaafsiisan in laga fogaado bulshada dhijitaalka ah lana horumariyo fikrado wanaagsan oo na siiya natiijooyin cajiib ah.
Suurtagal maaha inaad rabto inaad hagaajiso dhammaan xaaladaha ku jira internetka oo aad dareento inay ku daasheen niyadda xun ee dadku sababi karaan. Si kastaba ha noqotee, aad ayey macquul u tahay in Pinterest ayaa sameyn doonta cagsigeeda, laakiin isla markaa waxay qaadataa waqtigaaga inaad eegto biinanka xiisaha leh iyo qoraalada.
Sababaha loo joojiyo Pinterest
Dadka qaarkiis waxay ku andacoodaan in jacaylka ay u hayaan shabakadaha bulshada uu ka gudbo dhammaan waxyaabaha suurtogalka ah Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood fikrad fiican ayaa ah inaad awood u yeelatid inaad joogsato maalinba maalinta ka dambaysa iyo ka dhaaf wixii ka dhacaya adduunka dhijitaalka ah.
Marar badan waxaan ilaawnaa in da'da dhijitaalka ah ay taasi kaliya tahay, in kasta oo ay kooban tahay 90% waxqabadyada maanta, sidoo kale way fiicantahay in la eego waxa ka jira dunida dhabta ah. U bixida si aad ula sheekaysato asxaabta, u qabato hawlo abuuri kara mashquul dadka isticmaala, kobcinta mashaariicda hal abuurka ah, iwm.
Sidaa darteed, hoosta waxaad ku arki doontaa sababaha keenay in koontada Pinterest la joojiyo ama loo tirtiro Waqtigan xaadirka ah.
Mararka qaar waxaan u qaadanaa Pinterest ama bog kale sida madxafka fikradaha, runtiina maalmaheenna iyo nolosheenna dhexdeeda ayaa maraya. Fikrad aad u fiican ayaa ah inaad nasato oo aad meel dhigto wax kasta oo aan sifiican u socon mudadii loogu talagalay.
Fikrado si liidata loo qorsheeyay
Dadku waxay u muuqdaan inay rumaysan yihiin maxaa yeelay fikraddu sidii loogu talo galay uma socon, waxaa ugu wanaagsan in la sii wado isku dayga. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay tahay fikrad aad u fiican, laakiin sidoo kale way fiicantahay naso oo ka fikir madaxa qabow Maxaa dhacaya, tan awgeed waxaad si ku meelgaar ah u joojin kartaa koontooyinka.
Marka la eego sababaha aan kor ku soo xusnay, fikirka wanaagsan ayaa ah in la raaco talaabooyinka la qaadi doono si loo gaaro natiijooyin wanaagsan.
Waa inaad gujisaa astaanta saddexda-dhibic ah
Waa lagama maarmaan in la doorto ikhtiyaarka ah: "dejinta"
Waqtiga la galayo dejinta koontada
Xulo tabta: "deactivation account"
Waqtiga la qabanayo tallaabooyinkan, barxadda ayaa ku weydiin doonta sharraxaad ku saabsan sababta aad u nasanayso. Waad dhigi kartaa waxa waxaad rabtaa inaad ku wadaagto bogga.
Dhanka kale, si aad u tirtirto koontada la yiri waxaa macquul ah inaad ku sameyso isla talaabooyinka kor ku xusan. Laakiin go'aankani waa mid aad muhiim u ah in la sameeyo sidaa darteedna waa in si masuuliyad leh loo sameeyaa.
1 Sababaha loo joojiyo Pinterest
1.1 Waqti la'aan
1.2 Fikrado si liidata loo qorsheeyay
2 Sideen u tirtiraa ama u joojiyaa xisaabteyda Pinterest?